Global Voices teny Malagasy · 15 Febroary 2009
Tantara tamin'ny 15 Febroary 2009
Hong Kong: Nihemotra ny volavolandalàna momba ny fifidianana…………. Resak'alika izany!
Azia Atsinanana15 Febroary 2009
Raha toa ka ny fifanarahana tahaka ny filan-kevitry ny fifidianana no nanjary “adin’alika” eo imason’ireo ikoizan’ny lalana , Inona kosa ary izany no anjara asan’ny filan-kevitra momba ny fifidianana? Eny fa na dia ny tanjaky ny adin’alikan’ireo mpanao lalana LSD aza dia rava, mety hisy fanarenana mendrika ao amin’ny lamina...
Andro manokana StValentin: Misy ny fitiavana ve eny amin’ny lanitry proche Orient?
Arabia Saodita15 Febroary 2009
Raha misy dikany anarivony ny sary iray, dia io no sarin'i Cece, izay miorina anelanelan'i Bahrain sy Kuwait, nalefany amin’ny bolongana mba hamehy ny fahatsapany mikasika ny fetin’ny mpifankatia (saint Valentin). na dia tsy irery aza izy amin’ny fanazavana ny fombafomba, izay mbola vaovao tanteraka ho an’ny faritra, ny hafa...
Madagasikara: Mampihorohoro an'Antananarivo ny tsaho
Afrika Atsimo15 Febroary 2009
Simban'ny krizy politika efa mandratra an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao Marina sy ny fahafaha-miteny. Mandeha ny fandrahonana ary miely ny tsaho, manampy trotraka ny fampihorohoroana tsy mampilamina sy tsy mampitombina mihitsy izany rehetra izany. Taterin'i Jentilisa, mpamaham-bolongana iray tsy manohana mihitsy ny hetsika fanoheran'i Andry Rajoelina, fa nahazo fandrahonana izy:...
Ejipta15 Febroary 2009
Korea Atsimo15 Febroary 2009
Kambodza15 Febroary 2009